Lapho usebenza ngilazi, ungase udingeke ubole umgodi kuwo. Kulesi simo, ingcezu yeglasi, eyaziwa ngokuthi i-fragility yayo, kufanele ihlale ihambile. Imisebenzi engafaki, ngoba izimbobo zokugaya ezibukweni zikhomba ukubhujiswa kwendawo yesakhiwo seglasi. Kodwa, esebenza ngilazi amakhulu eminyaka, abantu baye bafunda ukwenza lokhu ngezindlela ezihlukahlukene. Nazi ezinye ezimbalwa zazo.
Kodwa amazwi amabili okuqala. Okokuqala: ingilazi kufanele ibe "eluhlaza", ingabi lukhuni. Ukugcina kwanoma yikuphi ukuzama ukucubungula ngomshini kuzokwenqabela. Okwesibili: Ngaphambi kokusebenza ngilazi, vala amehlo akho.
Okokuqala, funda ukubopha umgodi egumbini ngamathuluzi ajwayelekile, afana nalabo abenziwe ngezimbobo kukhonkolo noma ensimbi. Kodwa-ke, kune-drill ekhethekile ne-spray ekupheleni kwayo idayimani elincane . Ububanzi bayo kufanele bulingane nobubanzi bomgodi odingekayo. Ukushayela kwenziwa nge-drill kuphela ngesivinini esincane. Kulesi simo, ukugqoka kumele kube ngokucacile ngeso lengilazi, noma yikuphi ukwehluka okuvela emaceleni akuvumelekile. Ingilazi ngokwayo ngalesi sikhathi kufanele ilele endaweni eqinile enezingqimba.
Ukumaka indawo yesikhombi esizayo nomakaki, khumbula: uma ingilazi ibanzi, umkhawulo wayo kanye nomngcele womgodi kufanele uhlukaniswe okungenani u-25 mm, uma lowo mncane ungaphansi kwama-13 mm. Okuncane kakhulu leli banga, ingozi enkulu ukuthi ngisho nangemva kokusebenzisa ngempumelelo ulwazi mayelana nokufaka umgodi egumbini, kuzothuthuka uma lisetshenzisiwe.
Ukushayela kwenziwa ngezinyathelo ezimbili. Okokuqala, ukucindezeleka okujulile kwe-2-3 mm kwenziwe endaweni yokumaka. Khona-ke umgodi uvinjelwe futhi i-groove igcwele ukudonsa kwamafutha enjini ukuze unciphise ukuqhuma. Uma usuqala ukusebenza, akunakwenzeka ngesikhathi esifanayo ukwehlisa umgodi ngamandla - mhlawumbe uzophuka noma ingilazi izonyuka.
Kukhona ezinye izindlela, njengokufaka umgodi egumbini, ukufaka i-lubrication nokupholisa njalo.
Esikhathini ingilazi izikhathi eziningana zifaka isicelo, ukusifaka, itayipi lepende, lapho kulungiselelwe khona umgodi. Ukushayela nge-drill pen drill, ngaphambilini ifakwe emanzini, ngejubane eliphakathi, ukukhumbula ukupholisa ithuluzi ngezikhathi ezithile bese umanzisa umgodi ngamanzi.
Awukwazi ukusebenzisa i-scotch, kodwa uhlale ungeze engxenyeni ejulile yokwenza i-turpentine ne-rosin (1: 1).
Enye indlela kanje. Ingilazi isendwangu elithambile. Umakaki ubeka indawo yomgodi, emva kwalokho uhlobo lwebhabhu lubunjwa nxazonke kusukela epulasitiki yengane. Kukhona uketshezi olunamanzi (isisombululo se-aluminium alum ku-acetic acid noma i-camphor + turpentine 1: 1). Ukushayela kwenziwa nge-revs ephansi ne-carbide drill.
Ungakwazi ukuzikhawulela ekutheni upholile kuphela, uhlale ubheka ukuthi "ebhodini", kodwa ubuchwepheshe buyashintsha. Ngemuva kokuthi iphuzu le-drill liboniswa ngaphesheya kweglasi, kufanele liphenduke futhi liqhubeke ngaphesheya.
Kulezi zimo, ithuluzi lokugaya ngokwayo alibalulekile, kodwa yiluhlobo luni lwamanzi olugcobayo bese lubaleka.
Kodwa indlela yokubopha umgodi egilazini ngaphandle kombukiso okhethekile. Esikhundleni salokho, kusetshenziswe ithusi elingenalutho elingu-100 mm ubude. I-pre-it igcwele ingxube (amafutha amaminerali + uthuli ovela e-corundum emery). Ukushayela kuqhutshwa ngeziphazamiso, lapho i-tube iphakanyiswa khona, ukuze kancane kancane ingxube igezeke kuyo. Amandla okudla ayincane.
"Electrolux": ama-air conditioners. Izinhlobo, izici nokubuyekeza